अडियो बारे मालाले मुख खोलिन् ! पुण्यले खुट्टा ढोगे, हेमाको दा’दागि’री (भिडियो सहित) – Online Nepal
अडियो बारे मालाले मुख खोलिन् ! पुण्यले खुट्टा ढोगे, हेमाको दा’दागि’री (भिडियो सहित)
March 13, 2020 1898
केही दिन अगाडी पि’डित भनिएकी माला शाह, हिमा श्रेष्ठ र अन्य केही महिलाको साथमा उनीहरु जर्नेल खत्रीको घरसम्म पुगेका थिए। जर्नेलको घर घेराउ गर्न पुगेका माला र हेमासहित ६ जना महिलालाई प्रहरी प’क्राउ गरेर ल’ठ्ठी पनि बर्साएको थियो। नेपाली सेनाका पुर्व जर्नेल हेम खत्रीबाट पि’डित भनिएकी माला शाह र अर्की श्रीमान पि’डित हिमा श्रेष्ठबीच पैसाको कुरालाई लिएर वि’वाद भएको छ।
उक्त घ’टनापछि हि’रासतमा रहेकी माला शाहलाई मिडियाकर्मी र हिमाले धरौटीमा निकालेका थिए । माला शाहलाई धरौटीमा निकाल्दा हिमालाई दिनु पर्ने रकम बाँकी रहेको भन्दै हिमा मालाको कोठामा पुगेकी छिन् । हिमा श्रेष्ठले माला शाहलाई पुण्य गौतम बिरुद्ध उजुरी दिन भनेको तर मालाले पुण्य बिरुद्ध मु’द्दा दायर नगर्ने भएपछि रि’समा हिमा पैसा पाउँ भनि मालाको घरमा पुगेकी हुन् । मालाको कोठामा पुग्दा हिमा र माला बीच चर्का चर्की नै परेको छ ।
हिजो मात्र पुण्य गौतममाथि हा’तपा’त भएको थियो भने उनी बेहोस पनि भएका थिए । अडियो सार्वजनिक हुने ड’रले पुण्य बेहोस भएको पनि केही मिडियाकर्मीले बताएका छन् । हिमाले मालाको घरमै दा’दागि’री देखाएकी छिन् । १५ हजार माग्दै गरेको भिडियो बाहिरिएपछि माला शाहले स्पस्टिकरण दिएकी छिन् । पुण्य गौतमले पनि माफी माग्दै खुट्टा ढोगेको उनले बताएकी छिन् । माला शाह र हिमा श्रेष्ठबीच भएको विवादको जानकारी बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुस् :
Prevट्याक्सीवालाले लुट मच्चाउन नपाउने भन्दै सरकारले टुटल र पठाओलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दियो निर्देशन
Nextएबीएस सहित पल्सर २२० को बिक्री सुरु, यस्तो छ मूल्य र अफर
आफ्नै श्रीमतीलाई उनका प्रेमीसंग बिहे गराईदिने अचम्मका श्रीमान, अझै भएको छैन सम्बन्ध विच्छेद (भिडियो हेर्नुस्)
विराटनगरमा १८ जना नयाँ संक्रमित थपिए
भोलिदेखि २५ जना भन्दा बढी म’लामी जान नपाइने